Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Angola iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo ayaa dillaacay
Angola iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo ayaa dillaacay
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (DRC) ayaa ku dhawaaqday in la soo afjaray xanuunka huruudda ah ee dalkaas maanta ka dib markii si la mid ah looga dhawaaqay Angola 23-kii December 2016, taasoo soo afjartay dillaacii
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (DRC) ayaa ku dhawaaqday in la soo afjaray xanuunka hurdiga ah ee ka dillaacay dalkaas maanta ka dib markii si la mid ah looga dhawaaqay Angola 23-kii December 2016, taasoo soo afjartay cudurkii ka dillaacay labada waddan ka dib markii aan la soo sheegin kiisas cusub oo la xaqiijiyey oo ka yimid labada waddan. lixdii bilood ee la soo dhaafay.
"Waxaan awoodnaa inaan ku dhawaaqno dhamaadka mid ka mid ah kuwa ugu weyn uguna dhibka badan ee ka dillaacay qandhada jaalaha ah sannadihii la soo dhaafay anagoo adeegsanayna jawaabta adag oo isku dubaridan ee mas'uuliyiinta qaranka, shaqaalaha caafimaadka maxalliga ah iyo la-hawlgalayaasha," ayuu yiri Dr Matshidiso Moeti, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). ) Agaasimaha Gobolka ee Afrika, isagoo bogaadiyay jawaabta aan horay loo arag ee baaxadda leh ee laga bixiyay cudurka dillaacay.
Cudurka dillaacay, oo markii ugu horreysay laga helay Angola bishii Diseembar 2015, ayaa sababay 965 xaaladood oo la xaqiijiyey oo ah qandho jaale ah oo ku kala baahsan labada waddan, iyadoo kumannaan kale la tuhunsan yahay. Kiiskii ugu dambeeyay ee Angola laga helo wuxuu ahaa 23kii Juun 2016 kii DRC kii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa 12 Luulyo isla sanadkaas.
In ka badan 30 milyan oo qof ayaa lagu tallaalay labada waddan ololayaal tallaal degdeg ah. Qaybtan muhiimka ah ee jawaabta waxaa ka mid ahaa ololeyaal nadiifin iyo ka hortag ah oo adag in la gaaro meelaha ilaa dhamaadka sanadka si loo hubiyo ilaalinta tallaalka ee dad badan dhammaan meelaha khatarta ah ee suurtogalka ah. Jawaabtan aan hore loo arag ayaa daalisay kaydka caalamiga ah ee tallaalada qandhada jaalaha ah dhawr jeer.
In ka badan 41 000 mutadawiciin ah iyo 8000 oo kooxood oo tallaal ah oo leh in ka badan 56 la-hawlgalayaal NGO ah ayaa ku lug lahaa ololayaasha tallaalka ballaaran. Tallaalada la isticmaalay waxay ka yimaadeen kayd caalami ah oo ay wada-maamulaan Médecins Sans Frontières (MSF), Xiriirka Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas iyo Ururada Bisha Cas (IFRC), UNICEF iyo WHO. 6-dii bilood ee ugu horreysay 2016 oo keliya, la-hawlgalayaashu waxay bixiyeen in ka badan 19 milyan oo qiyaasood oo tallaal ah - saddex jeer 6 milyan oo qiyaasood ayaa inta badan meel loo dhigaa dillaaca. Gavi, Isbahaysiga Tallaalka ayaa maalgeliyey qayb muhiim ah oo tallaallada ah.
Kiisaska ugu horreeya ee cudurkan dillaacay ayaa la aqoonsaday 5tii Disembar 2015 ee Viana, Gobolka Luanda, Angola. Cudurkan ka dillaacay ayaa ku fiday dalka oo dhan iyo dalka ay jaarka yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, halkaas oo faafitaanka maxalliga ah la aasaasay bishii Maarso 2016.
Laga soo bilaabo bilowgii faafitaanka, Angola waxay soo sheegtay wadar ahaan 4306 xaaladood oo looga shakisan yahay iyo 376 dhimasho ah, kuwaas oo 884 xaaladood iyo 121 dhimasho ah la xaqiijiyay shaybaar.
Cudurkan dillaacay, DRC ayaa soo sheegtay 2987 xaaladood oo la tuhunsan yahay, iyadoo 81 shaybaar la xaqiijiyey kiisas iyo 16 dhimasho ah.
Qiyaaso degdeg ah si loo gaaro dad badan
Mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee laga gaaray ka jawaabista cudurkan dillaacay ayaa ahaa hirgelinta istaraatiijiyad cusub oo lagu badbaadinayo qiyaasta iyadoo la adeegsanayo shan-meelood meel qiyaasta caadiga ah ee tallaalka xumadda jaalaha ah - farsamo ay ansixiyeen kooxda khubarada tallaalka caalamiga ah ee WHO si loo ilaaliyo dadka ugu badan ee suurtogalka ah. laga soo bilaabo khatarta degdega ah ee ka imanaysa dillaac weyn oo magaalooyinka ah.
WHO waxa ay ku taageertay Wasaaradda Caafimaadka ee DRC in ay tallaalto 10.7 milyan oo qof oo ku nool magaalada Kinshasa iyada oo adeegsanaysa istaraatiijiyadan kaydinta qiyaasta muddada gaaban oo bixin doonta ka-hortagga xumada jaalaha ah ugu yaraan 12 bilood lagana yaabo in ka badan.
Taageerada wadamada ayaa sii socota
Ka sokow taageeridda ololayaasha tallaalka ballaaran, WHO iyo la-hawlgalayaasheeda waxay sii wadaan inay taageeraan Angola iyo DRC si ay u xoojiyaan ilaalinta cudurrada, si loo xakameeyo faafitaanka kaneecada iyo ka qayb qaadashada bulshooyinka si ay naftooda u difaacaan.
Isbeddelka cimiladu, korodhka dhaqdhaqaaqa dadka ee gudaha iyo xuduudaha laga soo bilaabo miyiga ilaa magaalooyinka dadku ku badan yahay, iyo soo kabashada kaneecada Aedes aegypti ayaa kordhinaysa khatarta cudurrada faafa ee qandhada jaalaha ah.
"Xandhada Jaallaha ah ee dillaaca sida Angola iyo DRC waxay noqon kartaa mid soo noqnoqda meelo badan oo adduunka ah haddii aan la qaadin tillaabooyin la isku dubariday si loo ilaaliyo dadka halista ugu jira. Sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan hirgelino hab ka hortag oo xooggan si aan u tallaalno dadka halista ugu jira guud ahaan gobolka,” ayuu yiri Dr Ibrahima Socé Fall, oo ah Madaxa Gurmadka Gobolka ee WHO.
Iyada oo laga jawaabayo, isbahaysi ballaadhan oo ay ku jirto WHO ayaa dhawaan soo saaray istaraatijiyad cusub oo ku baaqaya in la ciribtiro Caabuqa xumadda Jaallaha ah (EYE) si loo xoojiyo waxqabadka caalamiga ah iyo in la mideeyo casharradii laga bartay dillaaca Angola iyo DRC.
Qaybaha muhiimka ah ee istiraatijiyadda EYE waxaa ka mid ah tillaabooyin lagu hubinayo in dadka la tallaalo ka hor inta uusan dillaacin, kordhinta tirada kaydka tallaalka adduunka ee wax ka qabashada dillaaca iyo taageerada u diyaargarowga ballaaran ee waddamada halista ugu jira.
2017 maraakiibta dalxiis ee ugu fiican adduunka ee la magacaabay
Duulimaadyadu waa inay buuxiyaan shuruudaha rakaabka ugu horreeya ee wareega ee 2017